Mini Grid Bridge Loan - Myanmar Citizens Bank (MCB)
What is Mini Grid Bridge Loan?
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် (MCB Bank) အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ မျှော်မှန်းချက်ကို အထောက်အကူ ပြုပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် တစ်နိုင်ငံလုံးမီးရရှိရေးအတွက်Mini-gridလုပ်ငန်းရှင်များအား အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်သော ချေးငွေအမျိုးစားဖြစ်ပါသည်။
အပေါင်ပစ္စည်း ထားရှိရန် မလိုအပ်ခြင်း။
တစ်နိုင်ငံလုံးမီးရရှိစေရန် MCB အနေဖြင့်လည်း အခန်းကဏ္ဍ တစ်နေရာက ပါဝင်နိုင်ခြင်း။
ရွေးချယ်မှု ၁ – ဘဏ်မှ ချေးငွေ ၁၀၀% အား ထုတ်ပေးမည်။ Customer မှ အတိုးအား လစဉ် သို့မဟုတ် ၃ လတစ်ကြိမ် ပေးသွားရန်သာလိုသည်။ အရင်းအား သက်တမ်းပြည့်ရက်တွင် ပြန်ဆပ်ရမည်။ (Arrear)
ရွေးချယ်မှု ၂ – အတိုးအား ဘဏ်မှ ထုတ်ပေးသည့်ချေးငွေပမာဏထဲမှ နှုတ်ယူမည်။ Customer မှ ထုတ်ပေးသည့်ချေးငွေအား သက်တမ်းပြည့်ရက် ပြန်ဆပ်ရမည်။ (Upfront)
မည်သည့် ဝန်ဆောင်ခများ ကောက်ခံခြင်း မရှိပါ။
ကုမ္ပဏီ အရှုံးမြတ်စာရင်းရှင်းတမ်း (၃နှစ်)
ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်း (၆ လ)
DRD မှ အသိမှတ်ပြုထောက်ခံချက်
DRD နှင့် Developer တို့ ချုပ်ဆိုသော စာချုပ် (project by Project)
The borrower should have been business operations providing power generating solutions for the past three years. Evidence of financials and technical resources to undertake mini-grid project development in the future.
The business operations should have been profitable for the past three years.
The borrower should have been an approved Mini-Grid developer by the DRD.
The borrower should have completedaminimum of two (2) similar projects or has undertaken three projects with at least 75% of the projects completed as confirmed by DRD.
Applicant to have been dealing with the equipment supplier in the past (evidenced through Sales Agreement/ Bill of Lading).
When the developer submits the prefeasibility study to DRD, he/she also needs to apply the requirement document to MCB Bank to reduce the processing time. Then, he/she needs to open both USD and MMK accounts at MCB Bank.
*The developer can apply the loan at MCB Branches.